ညီလင်းသစ်: ? ? ?
Posted by ညီလင်းသစ် au 24.12.11
Nice one.. wish you the same.. but thro letters :)
အသံနဲ့ ပြောထာတဲ့ post ကအလွန်ကောင်းပါတယ်။
ပျှော်ရွှင်စရာကောင်းသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ 
shinlay and Thomas
အသံပို့ စ်က အရမ်းကောင်းတယ် ကိုညီ..ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ..
ဘာဖောင့်မှ မသုံးထားပေမဲ့ ဘလောဂ့်ပိုင်ရှင်က အသံကောင်းတော့လည်း ဖတ်ကောင်း နားထောင်လို့ကောင်းပြီး အိုင်ဒီယာအသစ်လေး ဖြစ်တာပေါ့ကိုညီလင်း။
ကိုညီလင်းအသံကောင်းသလို ဓာတ်ပုံတွေလည်း ကောင်း။
ဒါနဲ့ စကားပြောတဲ့ လေသံက အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုခုက အသံလွှင့်နေတာနဲ့တောင် တူနေသေး..
ကိုညီလင်းသစ်တို့ မိသားစုအတွက်လည်း ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ္စမတ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့..
(ကော်မန့်ကျတော့ အသံနဲ့ ပေးမရလို့ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ပေးလိုက်တယ်နော်. ) :P
Happy 5th year anniversary of your blog, ကိုညီလင်း။ အသံလေးက ကြည်ပြီး နှေးနှေးလေး ပြောနေတာ နားထောင်လို့ အဆင်ပြေတယ်။ ရို့စ်က စကားပြောမြန်သူ ဆိုတော့ အဲ့လိုလေး ပြောတတ်ချင်လိုက်တား) ဘလော့ဂ် ၅ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အခုလို အိုင်ဒီယာ ကောင်းကောင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရယ်၊ အသံနဲ့ ပို့စ်ရေးတဲ့ ကိုညီလင်း တစ်ယောက် ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေရှင်။ စကားမစပ် အချိန်ရှိရင် ရို့စ်ရဲ့ တက်ဂ်ပို့စ်လေးလည်း ရေးပေးပါဦးနော်။ အင်တာဗျုးလို ဖြေစရာ မလိုဘဲ နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံ (အက်ဆေး၊ ကဗျာ၊ ၀တ္ထုတို စသဖြင့်)နဲ့ ရေးနိုင်ပါတယ်နော်။
ရော ပြောပြီးပြီလေ တော်ကိုး တော်တာပါဆိုနေမှ
း) ကိုညီတို့ မိသားစု ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ္စမတ်နဲ့ မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
Cool Bro ! nice ... peace of mind to you ...
narrator လုပ်ရတာတကယ်မလွယ်တာ ကြုံဘူးတော့ မချီးမွမ်းဘဲမနေနုိုင်ပြန်ဘူး ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ဒီလို လေသံ tone မှန်မှန်နဲ့ အမှားအယွင်းမရှိ တဆက်တည်း အသံသွင်းဘုို့ ဆိုတာ အတော်မလွယ်တာပါ။ တဆက်တည်း အမှားအယွင်းမရှိ အသံသြဇာပြည့်ပြည့်၊အသံကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ ပြောသွားတာကတော့ ဆရာညီ မုို့ လို့ လုပ်နုိုင်တာလို့ ဘဲပြောပါရစေတော့။ ပြီးတော့ ထဲ့ထားတဲ့ပုံတွေကလည်း နှစ်သက်စရာကောင်းလွန်း
တော့ ပြီးသွားမှာတောင်စိုးမိသေး။း)) (အသံနဲ့ ဘဲမန့် ရမယ်ဆုိုရင်တော့ ကျမရဲ့ ငှက်ဆုိုးထုိုးသံလုိုမျိုးအသံမတင်ရဲတာနဲ့ မန့် ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ တော်သေးတာပေါ့...း)
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အသံပိုစ့်လေး တစ်ပုဒ်ပါ အစ်ကို...
အဲဒီလိုဘဲ ထူးခြားနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ခရစ်စမတ် ဆုတောင်းလေးပါ။ စိတ်ကူးလေး တကယ်ကောင်းတယ်။ အစ်ကိုက စာရေးကောင်းရုံတင် မဟုတ်ဘူး စကားပြောလဲ ကောင်းတယ်။ အသံလေးက နားထောင်ရတာ ကြည်ပြီး နားဝင်ချိုတယ်။ အစ်ကိုတို့ မိသားစုအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်နေ့ လေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် အစ်ကို...
နှစ်သစ်မှာ ဒီထက် စာတွေများများရေးနိုင်ပါစေ
ကွန်မန့်ပေးတဲ့သူတွေက ပို့စ်တင်သူလို ဖောက်ထွက်
ခွင့်မရှိပဲ လမ်းဟောင်းကြီးအတိုင်း ဇော်ဂျီဖောင့်သုံးရတာ
ဖွယ် ခရစ်စမတ်နှင့် နှစ်ကူးကာလကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
Good job, Good voice, I like it.
ကိုညီလင်းသစ်ရေ....သူများလည်း အဲလို စကားပြောပိုစ့်လေး လုပ်မလို့ဟာ....ပျင်းနေတာနဲ့ အသံ မသွင်းဖြစ်ဘူး။ ပုံတွေဆလိုက်နဲ့ တွဲတင်ဖို့တော့ မစဉ်းစားမိဘူး။ အဲလို အသံလေးနဲ့ ရေးတဲ့ပိုစ့်တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးထဲမှာ ရှိနေခဲ့တာတော့ ကြာပြီ။ ခုတော့ ကိုညီလင်းသစ်က လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ပြီပေါ့။ ကောင်းတယ် အသံအေးအေးနဲ့ အရေးချိုချိုတွေက ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ ထရိတ်မတ်ပေါ့ရှင်။ ပျော်ရွှင်စရာ ပိတ်ရက်များကို မိသားစုနဲ့ အတူဖြတ်သန်းရင်း နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြရအောင်လားရှင်....း)
နောက်ကျနေပြီ --- ခုမှရောက်လို့
အသံပို့ စ်က အရမ်းကောင်းတယ် ကိုညီလင်းရေ
ကျနော် ညီလင်းသစ် ပါဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးရေး) ပျော်ရွှင်စရာ ပိတ်ရက်လေးနဲ့အတူ မင်္ဂလာနှစ်ဖြစ်ပါစေခင်ဗျား ။
အစ်ကိုကြီး အသံက ဂရုဏာသံပါတယ် နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဗျ ။
ဘာဖောင့်မှ အသုံးမပြုထားတဲ့ အသံဖိုင်ပို့စ်လေးက တစ်မူထူးလို့ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုနေပါလားအကိုရေ....
ပျော်ရွင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း Happy New Year ပါ..
ကောင်းဒသောနေ့ရက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ အကို..
နားဆင်ရင်း စားစရာတွေ ရှုခင်းတွေလည်း
နှစ်သစ်ကို performance အသစ်နဲ့ ကြိုတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျို့။ အစ်မတို့လို မျက်လုံးအားနဲတဲ့သူတွေအတွက် တယ်ကောင်း၊ ဖွင့်ထားပြီး နားထောင်နေလိုက်ရုံပဲ :)
အဆုံးသတ်လေးမှာ ကျမမေငြိမ်းပါရှင်ဆိုတဲ့ အသံလေးကိုပါ သွားကြားယောင်မိတယ်...
Christmas နဲ့ New Year လေးဖြစ်ပါစေရှင်
ပြောချင်တာတွေအားလုံးက အပေါ်က လူတွေ ပြောသွားပြီးလို့ ကိုယ့်အတွက်တောင် ပြောဖို့ စကားလုံး မကျန်တော့သလိုပဲ ... ။
ကိုညီလင်းတို့ မိသားစုလေးအတွက် ... မင်္ဂလာရှိသော ခရစ်စမတ်နဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင် ... ။
I do like your new performance art.
အခြေအနေ အရ စာသားသံစဉ်လေး နားမထောင်ရပေမဲ့ သိပ်ကောင်းမယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ် နဲ့ နှစ်သစ် လေး ဖြစ်ပါစေနော်
ငြိမ်ငြိမ်လေးနားထောင်ရင်း ကျေနပ်သွားရတယ်...။ ခရစ်စမတ်ရက် အွန်လိုင်းမတက်ဖြစ်လို့ အခုမှ လာနိုင်တော့တာ ခွင့်လွှတ်ပါရှင်...။
အသံနဲ့ပို့စ်တင်တာတွေ နောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာရင် စွန့်ဦးတီထွင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်..။
(မှတ်ချက် - မမြသွေးနီ အသံမကောင်းပါ)
Hel taw.....Doe mg lay ga athan kaung yote chaw lay par lar:}
Happy New Year par .. :))
စာတွေလည်း ဒီ့ထက်ပိုရေးနိုင်ပါစေ ..း))
Hi bro! Voice ka ta arr listen lot kg tal...photo tawe ka lal ta arr hla tal...bro nat family Happy New Year par naw....KZ
ဟုတ်ပါတယ် ငါးနှစ်ဆိုတာ တကယ့်ကိုခဏလေးပါ ဘဲ ဘလော့စရေးတဲ့အချိန်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ မနေ့တနေ့ကလိုဘဲ ပူပူနွေးနွေးရှိနေဆဲပါ ... wow wow အသံလွှင့်ငှာနမှာ အလုပ်လျောက်ရင် သေချာပေါက်အလုပ်ရမယ့်အသံမျိုးဘဲး) စိတ်ကူးကောင်းတယ် ညီလင်းရေ
ညီလင်းတို့မိသားစုအတွက်လည်း ၂၀၁၂ ဟာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နှစ်သစ်တခုအဖြစ် ရောက်ရှိပါစေလို့ .......... ။ ။
mie nge ( ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ၂၀၁၁ )
M-xmas & Happy New year ပါ
အသံ ဆွဲဆောင်အားကောင်းတယ် ..
it is cool, like it. so beautiful pictures and views, gonna visit there one day, Merry christmas and Happy new year, God bless you and your family
အိုင်ဒီယာသိပ်ကောင်းတာဘဲ... ညီလင်းသစ်တို့မိသားစုအပေါ် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ကြွယ်ဝစွာကျရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....
အစ်ကို့အသံကြည်ကြည်လေး နားထောင်ပြီး ၂၀၁၁ ကိုအဆုံးသတ်တော့မယ်...။ ဒီနှစ်သိပ်မြန်သလိုဘဲ...။ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ...။
ဓါတ်ပုံတွေသိပ်ကောင်းတယ် ။ အားကျသွားတယ် ၊ စောင့်ဖတ်လျှက်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ .။
ညီလင်းသစ် ဘလော့ဂ်မှာ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်သော စိတ်ကူးကောင်းများ အစဉ်မွေးဖွား၍ မျှဝေနိုင်ရန်၊
သန့်ရှင်းမွန်မြတ်သော စိတ်အစဉ် တမိသားစုလုံးကို လွှမ်းခြုံပါစေလို့ နှစ်သစ်ဦး ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီအသံပိုစ်ကို ကိုညီလင်းသစ်တင်ကတည်းက မလေး ၃-၄ ခါရှိပြီ.. တစ်ခါမှ အဆုံးထိ နားမထောင်ဖြစ်ဘူး။ ပြောရရင် ရှည်မှာစိုးလို့... တန်းလန်းနဲ့ ထထသွားရလို့..။
ခြေရာမချိန် တိတ်တိတ်ကလေးလာသွားသူတွေထဲ မလေးလည်း ပါပါတယ်..
၅နှစ်မှ ... နှစ်ပေါင်းများစွာသို့...
အပေါ်က မီ ဆိုတာ မလေးအိမ့်ချမ်းမြေ့ပါ.. :P
ရံဖန်ရံခါ အလည်ရောက်တတ်ကြောင်းပါ။ အားပေးလျှက်...
ဒီအချိန်မှာ ကျေးဇူးအတင်ဆုံးအရာကို ပြောပါဆိုရင် ကွန်နက်ရှင်ကိုပဲ..
အခုလို အသံလေးကို အထစ်အငေါ့မရှိ..ပုံရိပ်ကလေးတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနားထောငိခွင့်၊ ကြည့်ခွင့်ရတာ နည်းတဲ့ ကုသိုလ်လားလို့ (မြန်မာပြည်က ပျော်၇ွှင်သံရယ်ပါ :P)
အသံက တော်တော် မိုက်တယ်..ငြိမ်နေတာပဲ
အားးးး အတော့်ကို တော်တဲ့
ဘာမှ ကို မပြောတတ်တော့ဘူး
ဒီရက်စွဲကို မှတ်မိနေတယ် အကို
ညီမ မွေးနေ့က aug 27 မို့..
Beginning ကို စဖတ်ခဲ့တုန်းက အဲ့ရက်စွဲကို သတိပြုမိခဲ့တယ်
ငါးနှစ်နောက်ကျခဲ့ပေမယ့် ၀မ်းသာတယ် အကို
အခု အချိန် ကြည့်ခွင့်၊ ဖတ်ခွင့် ရနေလို့
အသစ်အသစ်သော အနုပညာများနှင့် လင်းလက်နိုင်ပါစေရှင်...။
ဘီပီအေ (သို့မဟုတ်) မမြင်ရသော အန္တရာယ်
The Lady ...